အချက်အလက် အတော် များများ ပေါက်ကြားလာခဲ့တဲ့ Hyundai Ioniq5! – MyMedia Myanmar
အချက်အလက် အတော် များများ ပေါက်ကြားလာခဲ့တဲ့ Hyundai Ioniq5!
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ Hyundai အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ အသစ်ထွက်ပေါ်လာမယ့် Ioniq5လျှပ်စစ် SUV ကားနဲ့ ပက်သပ် ပြီး Teaser ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို ချပြခဲ့ပါသေးတယ်။ အဆိုပါ ကားကိုတော့ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ လ ထဲမှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြား သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အမည်မဖော်လို သူ တစ်ယောက်က Motor1.com ကို ပို့လာခဲ့သ လောက်တော့ Ioniq5ရဲ့ ပုံရိပ် အပြည့်အစုံ နီးပါး လောက်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုံရိပ်တွေနဲ့ အတူ အချို့ သော အသေးစိတ် အချက်အလက် တွေကိုပါ ဆက်လက် သိရှိလာခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို မြင်တွေ့လာရတဲ့ အပေါ်မှာတော့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ဆက်လက် ကြည့်ရှု ကြရတော့မှာ ဖြစ်ပြီး အခုပုံရိပ်တွေကအစစ်အမှန် တွေလား ဆိုတာကိုလည်း သတင်းရင်းမြစ် မသိရသေးတာကြောင့် အတိအကျအတည်မပြုနိုင်သေးပဲ အခြားသော အသေးစိတ် အ‌ချက်အလက် တွေကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ အခု ပုံရိပ် တွေကတော့ တရားဝင် Presentation တွေထဲက Screenshot တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး Hyundai Dealership တွေထဲက သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီရဲ့ တရားဝင် မိတ်ဆက်မှုတွေထဲ က အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
အခုအရင်ဆုံး မြင်တွေ့ရတဲ့ ပုံနှစ်ပုံထဲမှာ တစ်ပုံကတော့ ယခင် Hyundai ရဲ့ Fuel Cell Vehicles တွေ အနေနဲ့ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပြီး တစ်ခြား တစ်ခုကတော့ Brand ရဲ့ ဥရောပ Lineup အတွက် ပုံဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အခု အချိန်ထိတော့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာမှ အတည် မပြုနိုင်သေးပေမယ့်လည်းကားရဲ့ အရှေ့ဘက်နဲ့ အနောက် ဘက် ပုံရိပ်တွေဟာ ယခင် Hyundai ရဲ့ Teasers တွေနဲ့ Prototype Spy Shots တွေမှာ မြင်ခဲ့ရတာနဲ့ တော်တော် လေးနီးစပ် နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ချွန်ထွက်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံရိပ်နဲ့ Ioniq5ဟာ ဆိုရင်လက်ရှိ Ioniq ကားတွေက နေ ကွဲထွက်လာတာကတော့ သေချာနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရားဝင် Teasers တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ် ဆိုရင်‌တော့အခု ပုံရိပ်အသစ်တွေ ဟာ အရှေ့ ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက်က Fascias တွေရဲ့ အနိမ့်ပိုင်း အစိတ်အပိုင်းတွေ နဲ့တော့ အ နည်းငယ်လေး ကွဲပြားနေတာကိုတော့ မြင်ထားရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုပုံစံတွေကိုတော့ အစောဆုံး မြင် တွေ့ ရမယ့် Prototype Design ဒါမှမဟုတ် သီးခြား ဈေးကွက် တစ်ခုအတွက် ပုံစံလို့ ယူဆမယ်ဆိုရင်လည်း ရနိုင် ပါတယ်။
ကားမှာ ပါဝင်တဲ့ Turbine ဘီးတွေကတော့ မှန်ကန် နေပီ့း Spy Shots တွေထဲမှာ မြင်ခဲ့ရတဲ့ အတိုင်းပဲ ကျယ်ပြီး ပြားချပ်ချပ် အမိုးနဲ့လည်း ကိုက်ညီနေပြန်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အတော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ တစ်ချက် ကတော့ ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြထားတဲ့ အချို့သော ‌အသေးစိတ် အချက်အလက်‌ တွေပါပဲ။ ကီလိုမီတာနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ Ranges တွေအပြင် ဥရောပဈေးကွက်နဲ့ ကိုက်ညီနိုင်မယ့် အချက် အလက် တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တော့ အခု မြင်ရတဲ့ ပုံစံဟာ ဥရောပ‌ ဈေးကွက် အတွက် ကား တစ်စီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆထားလို့ ရနေပါတယ်။ WLTP Range အရ ဆိုရင် 510 km ကို 317 မိုင် ပမာဏအဖြစ် ပြောင်းလဲ တွက်ချက်လို့ရပြီး ယခင် တုန်းကတော့ ထွက်ပေါ် ခဲ့တဲ့ သတင်း တွေမှာ တုန်းကတော့ 362 မိုင်လို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုအခြေအနေကတော့ စောင့်ကြည့် ရဦးမှာပဲ ဖြစ်ကာ မတူညီတဲ့ ဘက်ထရီ ထည့်သွင်းမှု ပေါ်လည်း မူတည်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် ဖော် ပြထားတာ တစ်ခုကတော့ 310 hp ( 231 kW ) ဖြစ်ပြီး ယခင် တုန်းကတော့ 302 hp ( 225 kW ) အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေ အရဆိုရ‌င်တော့ အဆိုပါကားမှာ ၁၂.၃ လက်မအရွယ် Digital Display ကို အတွင်းခန်းမှာ တပ်ဆင်ပေးလာနိုင်ပြီး Head Up Display အပိုင်းမှာ ဆိုရင်တော့ Augmented Reality နည်းပညာ ကိုပါ အသုံးပြုပေးလာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ်သ တင်းတစ်ချို့အရလည်း ၄၄ လက်မအရွယ်ကို ဖော်ပြထားတာကြောင့် ဘယ်ဟာက အတည်လဲဆိုတာကို အတည်မ ပြုနိုင် သေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဆိုပါ ပမာဏဟာ လေးပေနီးပါးအရွယ်ကို ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြောင့် HUD အနေ နဲ့ အရှေ့ဘက်က Windshield တစ်ခုလုံးကိုပါ နေရာယူထားရမလို ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခု ဖြစ်နိုင်တာ ကတော့ အခုလို တပ်ဆင်မှုကို AR Setup နည်းပညာနဲ့ လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုရင်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ ကားရဲ့ ဘက်ထရီ အပိုင်းမှာလည်း အတော်လေးကို လျှင်မြန်တဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် 232 kW အားသွင်းနှုန်းကို ဖော်ပြထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု မြင်တွေ့ရတဲ့ ပုံရိပ်တစ်ချို့အရတော့ လမ်း ကြောင်းအရ မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကို ပြသနေပေမယ့်လည်း မေးခွန်းထုတ်စရာ အပိုင်းတွေလည်း ရှိနေသေး တာကို သတိပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုကားနဲ့ ပက်သက်လို့ကတော့ အချိန်အကြာကြီး စောင့်ဆိုင်း နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အခု သတင်းကို မြင်တွေ့ရပြီး နောက်လာမယ့် ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ် အကြာ လောက်မှာပဲ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ Ioniq5ကို တရားဝင် မိတ်ဆက်လာတော့မှာ မို့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post အချက်အလက် အတော် များများ ပေါက်ကြားလာခဲ့တဲ့ Hyundai Ioniq5! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-23T18:31:00+06:30January 23rd, 2021|MYCARS MYANMAR|